Maxkamadda Sare ee kenya oo Sheegtay inaan la Dhageysan karin kiiska Doorashada ku Celiska ah
Madaxa maxkamada sare ee kenya David Maraga ayaa sheegay in la hakiyey dhagaysiga kiiska doorashada ku celiska ah , maraga ayaa faahfaahin ka bixiyey ayaa
La OGAADAY: Dagaallada Ka Dhanka Ah Al-shabaab Oo Weji Cusub Loo Qaaayo…..
Sida xogta aan ku helnay, dowladda federaalka, AMISOM iyo Maraykanka ayaa bedalaya xeeladaha dagaalka ka dhan ah Maleeshiyaadka Al-shabaab. Xog aan ka helnay Xerada Xalane
Dhageyso:-Gudoomiyaha D/Mahadaay Oo Sheegay In Al-Shabaab Dhibaateeyeen Beeraleyda Degmadaas
Maamulka degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa faah fhin k bixiyay Wabiga Shabeelle oo Maalmihii la soo dhafay fatahaad k sameynayay deegaano hoostaga degmadaas. Gudoomiyaha degmada Mahadaay Cabdullaahi Maxamed Xuseen ...
Kulan ay Maanta ku yeesheen Magaalada Bydhabo ee Xarunta gobolka Baay Golaha la maagc baxay Golaha badbaadint koonfur Galbeed ayaa waxa ay kaga dhawaqeen in ay kaas oo horjeedeen talaabadii ...
Puntland oo wada qorshe ka dhan ah ururka loo yaqaan Takfiir wal hijrah.
Qoraal ka soo baxay shirkii Gollaha Wasiiradda dowladda Puntland ee shalay ayaa lagu sheegay in dawladu ay gacanta ku hayso qorshe ay doonayso inay kula dagaalanto waxa ay ugu yeertay ...
Xildhibaanada BF oo maanta ka doodaya Kiiska Qalbi dhagax & Olole Xoogan oo socda….
Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa la filayaa in maanta ay kulan ku yeeshaan Xaruntooda Muqdisho,kulankaas oo ah mid si gaar ah diiradda loogu saarayo wareejinta Dowladda Soomaaliya u dhiibtay Itoobiya C/Kariin ...
Jabhadda Muslimiinta Rohingya ee ka dagaallanta gudaha dalka Myanmar ayaa iskeed ugu dhawaaqday xabbad joojin dhaqangalaysa Axada maanta ah, si gargaar bani'aadannimo loo gaarsiiyo galbeedka fog ee dalkaasi. Jabhaddaasi ayaa ugu ...
Dhageyso:-Wadahadalada Soomaaliya Iyo Soomaaliand Oo Dib U Bilaabanaya
Hadalkaan ayaa waxaa wrbaahinta u sheegay wasiirka howlaha Guud iyo guryenta Maamulka soomaaliland oo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Haregysa kadib markii uu Turkiga kula kulmay Wasiirka Arrimaha dibadda dalkaas. Xasan Xasan ...
Akhriso:-Shirkii Wadda Tashiga Amniga Gobolka Mudug Oo War-Murtiyeed Laga Soo Saaray
Goordhow waxaa Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug lagu soo gaba gabeeyay shirkii wadda tashiga nabad galyada gobolka Mudug kaas oo laga soo saarey Qodobo gaaraya ilaa 10. Qodobada shirkaas la ...
Waxaa jiray warar la'isla dhexmarayay oo sheegayay in ay hoos u dhacday taageeradii badnayd ee loo hayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump , gaar ahaan taageeradii xisbiga Jamhuuriga ee uu ka ...